Ngabe Ukuphepha Kwe-Akhawunti Yami Kube Sengcupheni Ku-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ngabe ukuphepha kwe-akhawunti yami kubekwe engozini ku-twitter?
May 12, 2021 0 Comentarios 558
Umsebenzisi we-Twitter angabheka ukuthi ukuphepha kwakhe I-akhawunti ingeniswe ebucayini, lapho ubheka okulandelayo: Ubona amaTweets okuzenzakalela athunyelwe yi-Akhawunti yakho, ubona Imiyalezo Eqondile engahleliwe ethunyelwe ivela ku-Akhawunti yakho.
Umsebenzisi ibona imisebenzi yenziwe nge-Akhawunti yakho: Ungayilandela kanjani, ungayilandeli, uvimbele, njll. uthola izaziso ezivela ku-Twitter ezisho ukuthi i-Akhawunti yakho Yezokuphepha ingahle ibe sengozini, nokuthi imininingwane ye-Akhawunti yakho ishintshile futhi akuyena okushintshile.
Umsebenzisi uyabona ukuthi eyakhe iphasiwedi ayisasebenzi futhi, ipulatifomu ye-Twitter, ikucela ukuthi uyibuyise. Ngalo mqondo, Umsebenzisi udinga izinqubo ze-Twitter ukugcwalisa i-Akhawunti yakhe futhi ayivikele.
Izinyathelo Zokuthola Ukuphepha Kwe-akhawunti yami ye-Twitter
Izinyathelo okumele uMsebenzisi we-Twitter azilandele Thola Ukuvikeleka ye-Akhawunti yakho ye-Twitter: Shintsha iphasiwedi yakho ngokushesha, cela ukusethwa kabusha kwephasiwedi ku-Twitter.
Umsebenzisi kufanele aqinisekise ukuthi ifayela lakhe le- ikheli le-imeyili Qiniseka, ungakushintsha kusuka ku-Twitter iOS noma uhlelo lokusebenza lwe-Android noma ngokungena ku-twitter.com; khipha ukuxhumeka kwezinhlelo zokusebenza zenkampani yangaphandle ongazi ngazo.
Ngaphezu kwalokho, uMsebenzisi kumele buyekeza iphasiwedi yakho kuzicelo ezivela eceleni ozethembayo; ngoba i-akhawunti yakho ivezwe ekuvinjelweni okwesikhashana yingxenyekazi ye-Twitter ngenxa yemizamo yokungena ngemvume engaphumelelanga.
BIKA UKUHLUKUMEZEKA KU-TWITTER
Enkundleni yokuxhumana kukhona kwesinye isikhathi izimilo leyo engaphandle kweMithetho Nezinqubomgomo ze-Twitter, eziba yisicefe futhi zithinte izingxoxo ezibonakalayo phakathi kwama-Twitter. Lezi zimo zengqondo empeleni azizona izehlakalo zokuhlukunyezwa.
Uma Umsebenzisi we-Twitter athola Imilayezo Eqondile noma Ukuxhumana okweqile yama-Akhawunti Ahlukumezayo, ungenza okulandelayo: Yeka ukulandela bese uqeda noma yiluphi uhlobo lokuxhumana ne-Akhawunti ekhonjisiwe; ngale ndlela, kusho i-Akhawunti izolahlekelwa inzalo lapho ingabhekelelwa nhlobo.
Uma isimo se- I-Akhawunti Ehlukumezayo iyaqhubeka, Umsebenzisi uphakanyiswa ukuthi ayivimbe, ngaleyo ndlela ibavimbele ekukulandeleni, noma babone isithombe sakho sephrofayela ekhasini lakho lephrofayili noma kumugqa wakho wesikhathi; ngale ndlela, izimpendulo zakho noma okushiwo kwakho ngeke kuvele kuthebhu yakho yezaziso.
Ngithola izinsongo ku-Twitter
Enkundleni yokuxhumana nabantu iTwitter yenzeka kancane ngayo yonke into, ngoba ihlangana kahle Ubuningi babasebenzisi emhlabeni wonke ngokuziphatha nezenzo ezahlukahlukene ezingathinta, ngokuhle noma kabi, ukuba sengozini kwabantu abacishe badlule nge-Twitter.
Umsebenzisi, uma ngabe etholile Izinsongo yanoma yiluphi uhlobo futhi ucabanga ukuthi ubuqotho bakho bomzimba busengozini, kufanele uthinte uMnyango Wezamaphoyisa; kulokhu: Bhala Imilayezo Ehlukumezayo noma enobudlova ohlangabezane nayo ngenkathi uhlala kwinethiwekhi ye-Twitter.
Kubalulekile ukuthi Umsebenzisi ukuphakela wonke umongo ongaba khona maqondana nabasolwa okungenzeka ukuthi bakhombise nokuziphatha ngokweqile kwenye inethiwekhi yokuxhumana nabantu; futhi unikeze imininingwane ehlobene nezinsongo zangaphambilini ezitholiwe.
1 Izinyathelo Zokuthola Ukuphepha Kwe-akhawunti yami ye-Twitter
2 BIKA UKUHLUKUMEZEKA KU-TWITTER
3 Ngithola izinsongo ku-Twitter
Ungakuqopha kanjani ukusakazwa ku-twitter?
Ungazixazulula kanjani izinkinga zami ku-twitter?